Saika hamatsiana fitaovam-piadiana ny dahalo… : bala “chevrotine” maro tratra tany amin’ilay ramatoa (NewsMada) | AEMW
Saika hamatsiana fitaovam-piadiana ny dahalo… : bala “chevrotine” maro tratra tany amin’ilay ramatoa (NewsMada)
Voasambotry ny polisy misahana ny ady heloka bevava, sakelika fahefatra eny Anosy, ny asabotsy 27 aogositra 2016, tamin’ny 10 ora maraina, teny Tanjombato ny vehivavy iray, teo am-pivarotana bala « chevrotine calibre 16 » miisa 130.
Nahazo vaovao ny polisy fa misy olona mpamatsy bala mifamotoana eny an-toerana tamin’io asabotsy io. Nanao ny fanaraha-maso sy ny fanarahan-dia ny polisy, ka olona telo sarona teo am-pifampivarotana ireo bala. Tafatsoaka kosa ny roa raha vao nipoitra ny polisy. Ilay vehivavy iray tavela teo fa niraikiraiky. Tratra teny aminy ny bala “chevrotine calibre 16” miisa 130.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny polisy, mpamatsy sy mpivarotra basy any amin’ny faritra Melaky, Bongolava, Anosy ireo olona ireo. Niaiky ity vehivavy tratra fa mpanao io asa ratsy io izy. Tsy nilaza kosa anefa ny polisy raha efa nisy firy ny basy sy bala efa lafon’izy ireo. Tsy fantatra mazava kosa ny mpandray. Raha ny olona avy any amin’ireo faritra voatonona mifandray amin’ireo mpivarotra ireo, heverina fa any amin’ny toerana be dahalo no mividy azy. Nisy ihany ny resaka nandeha fa ireo olona mitady fitaovam-piadiana hiarovan-tena no tena mandray izany. Tsy misy taratasy ara-dalàna anefa ireo fitaovam-piadiana ireo, ary voarara ny fivarotana azy.
Mahagaga koa, fa aty an-drenivohitra aty ny isehoan’ny fifampivarotana ireto fitaovam-piadiana ireto. Raha ny teny Tanjombato, voalaza fa tamin’ity indray mitoraka ity vao fantatra ny fisian’ny asa ratsy eny. Raha tsy nisy ny loharanom-baovao azon’ny polisy, tsy sarona ireo mpanao izany. Voalaza anefa fa miovaova ny toerana ivarotana itony bala sy basy itony.
Karazam-basy ampiasain’ny dahalo
Tsy voalohany nahatrarana karazam-basy sy bala ampiasana ny “chevrotine” toy izao, fa toy ireto ihany koa ireo tratra tany Toamasina, tao amin’ny seranan-tsambo sy tany Nosy Be. Manaporofo ity teny Tanjombato ity fa efa tena miparitaka be ny karazam-basy sy bala “calibre 16”. Araka ny tatitra avy amin’ny mpitandro filaminana any amin’ireo toerana be dahalo, matetika bala “chervortine” ireo miparitaka ka mahafaty avy hatrany. Fampiasan’ny mpitandro filaminana koa io karazam-bala io amin’ny atao hoe “fusil à pompe”.
Araka izany, loza mihantona ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana tahaka izao. Ny jiolahy mpanafika, ny dahalo samy efa mampiasa basy avokoa. Manao ny ezaka ny mpitandro filaminana, kanefa azo antoka fa misy ireo mpiray tsikombakomba any ho any ka mahatafiditra sy mampivoaka ireny amidy etsy sy eroa. Andrasana kosa anefa ny fahatrarana ny mpandray fa tsy ny mpivarotra ihany. Natolotra ny fampanoavana, omaly, ilay ramatotra tratra ary naiditra am-ponja vonjimaika.
← Le désert en écho (NewsMada)
Madagascar en tête du classement des pays africains qui cèdent le plus leurs terres aux investisseurs étrangers (Tribune) →